Archive du 20180801
Kandida filoha Samy hampiasa fitaovana goavana
Manomboka miditra lalina amin’ny fifaninanan’ny fifidianana isika na tsy mbola raikitra aza ny propagandy.
Rivo Rakotovao ho Filoha Krizy vaovao ho an’i Madagasikara
Ny filohan’ny Antenimierandoholona no voafaritry ny lalàmpanorenana fa mandray ny toeran’ny filoham-pirenena raha mbola hirotsaka hofidiana izy, araka ny voalazan’ny andininy faha-46.
Hetsi-panoherana eto Madagasikara Tsy hita mazava izay tena tanjony
Ny niady hahatafapetraka ny lehiben’ny mpanohitra eo anivon’ny antenimieram-pirenena, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana aza tsy mbola vitan’ny antoko mpanohitra eto amintsika hatramin’izao.
Na mpanao politika , na olon-tsotra Maro no be fanakianana kanefa tsy manana vahaolana
Pety Rakotoniaina sy ny HFI Hitory an’i Andry Rajoelina
Fifanandrifian-javatra ve sa kajy efa voarindra? Iray andro mialoha ny famoriam-bahoaka hotontosain’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina,
Fifidianana 2018 Manomboka anio ny fanaterana dosie
Anio amin`ny 8 ora maraina no hisokatra ny fandraisana an`ireo antontan-taratasin`ireo maniry hilatsaka hofidiana filoham-pirenena amin`ity fifidianana 2018 ity etsy amin`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) Ambohidahy.
Tetikasa “RANO WASH” Hamatsy vola 30 tapitrisa dolara ny USAID
Nisy ny atrikasa nokarakaraina momba ny Rano Wash omaly talata 31 jolay tetsy amin’ny Hotely Solimotel Anosy.
Fampiasam-bola eto Madagasikara Tsy miteraka harena ny ankamaroany
Tsy vitan’ny hoe kely sy tsy ampy ny vola miodina eto Madagasikara fa sady tsy miteraka harena.
Ahiana ny afera maloto goavana Hitokona ny mpiasan’ny minisiteran’ny jono ?
Mbola ratsy lavitra noho ny teo aloha ny afera maloto ato amin’ny minisiteran’ny jono, hoy ny fampitam-baovao iray. Vola ana miliara maromaro no re fa nalain’ny minisitra Augustin Andriamananoro raha nandeha nanao fitsirihana sambo sinoa tany an-toerana herinandro maromaro izay, raha ny voalazan’io loharanom-baovao io hatrany.
Rugby Amboaran’ny Ben’ny tanàna Raikitra ny andiany voalohany
Araka ny fanazavana nomen’ny tanànan’Antananarivo notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny mpanao gazety tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly talata 31 jolay 2018 dia hotontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny 12 sy 19 ary 26 aogositra 2018 izao ny andiany voalohany amin’ny “Amboaran’ny Ben’ny tanàna” eo amin’ny taranja rugby à XV.
Mbola hanaiky hosasana atidoha ?
Manomboka anio ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo kandida, ary ho hita eo amin’izay hoe iza no nitsapatsapa sy nanao resabe fotsiny, saingy tsy sahy sy hihemotra, ary iza ireo tena sahy sy vonona ?
Saran-dalan’ny Taksibe 500 Ar ho an’ny FMA, 400 Ar ho an’ny UCTU
Hanomboka anio alarobia 1 aogositra no hampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary ireo taksibe mivondrona ao amin’ny FMA izay ahitana ny kaoperativa Mirindra (194-163), Mihary (165), Sitraka (109), Kofitama (143), Mitambatra (166) ary Onja (192).
Kidnapping tany Tsaratanàna Tranga dimy tao anatin`ny efa-bolana
Mirongatra hatrany ny fakana an-keriny tamin`ity taona ity ary toa lasa fomba amam-panao any amin`ny tontolo ambanivohitra.
Voafonja ao Antanimora Miandry fitsarana avokoa ny antsasa-manila
Omaly talata 31 jolay 2018 no natao tetsy amin’ny DLC Anosy ny atrikasa jeritodika ny tetikasa iadiana amin’ny fitazonana am-ponja mialoha ny fitsarana tsy manara-dalàna.
Vinam-piarahamonina Azon’ny Malagasy tsara ve ?
Samy manovokovoka amin`izay ireo kandidà ho filoham-pirenena amin`ny fifidianana manaraka. Hisokatra amin`izany ny fotoana hanaovana kabary feno fampanantena satria ho henjana ny fifaninanana.
Fivalanan-drano miparitaka etsy sy eroa Azo havadika ho herinaratra hanazavana ny tanàna
Raha mbola olana goavana eto amintsika ny fiparitahan’ny fivalanan-drano eny rehetra eny amin’izao dia nahita vahaolana mifandraika amin’izany ireo mpianatry ny sekoly ambony ISPM eny Antsobolo, ao amin’ny taona faharoa.
Hetran-trano sy hetran-tany Fa mankaiza marina ?
Betsaka ireo tokantrano tsy mety mandoa hetra eto Antananarivo Renivohitra na dia efa isan-taona aza no hanaovana azy ary manomboka amin’ny 2.000 Ar.